Ungasibeka njani isicatshulwa esisezantsi 3 ngeSpanish | Ubunlog
Ungasibeka njani isicatshulwa esisezantsi 3 ngeSpanish
Umbhalo ophantsi wayengomnye wabahleli beekhowudi zokuqala ukuba babe nokufaka okujolise kubuntu. Kule meko ibiyipakethe yetyala kodwa kwiwebhusayithi yabo yokukhuphela bongeze ilebhile "ubuntu" kubasebenzisi baka-Ubuntu.
Nangona kunjalo, lo mhleli wekhowudi, njengabaninzi abakhuphisana nabo, Umbhalo ophantsi 3 ubhalwe ngesiNgesi kwaye ayisiSpanish njengoko uninzi lwethu luthanda. Ingxaki yokwenyani kubasebenzisi abangasaziyo isiNgesi okanye abafuna ukufumana okungcono kulo mhleli wekhowudi uthandwayo.Inguqulelo yamva nje yeSicatshulwa esiPhakamileyo, isicatshulwa esiPhakamileyo 3, ayicingi ukhetho lweelwimi ezininzi kwaye oko kuseseyingxaki, Kodwa phantse yonke into eku-Ubuntu, umbhalo ophantsi 3 unokufakwa ngeSpanish kwaye simahla.
Kule meko siza kuyisebenzisa indawo yokugcina yangaphandle yeGithub obeka iimenyu ngeSpanish. Le phakheji ayikho semthethweni kodwa isebenza kakuhle kwaye kuphela kwento enokwenzeka ngoku ukuba siguqulele umbhalo ophantsi wesi-3 woBuntu bethu. Kuqala kufuneka sikhuphele iphakheji ye-zip kunye nekhowudi yokuguqula.
Kanye Siyikhuphele iphakheji ye-zip, kufuneka siye "Ukukhetha -> Khangela iiPakeji ..." Kwaye iwindow encinci iya kuvela apho kuya kufuneka sikhethe iphakheji esiyikhuphelileyo. Nje ukuba sicinezele iqhosha lokwamkela, kuya kufuneka siqale kabusha umhleli wekhowudi ukuze utshintsho olwenziwe luqale ukusebenza.
Kodwa kufunekaQaphela ukuba ungayicimi iphakheji ye-zip esiyikhupheleyo. Ukusombulula le ngxaki, isisombululo esifanelekileyo kukukopa iphakheji ye-zip esiyikhupheleyo kwaye siyigcine kwindlela ebonakala xa sifikelela kwiPakeji yeePakeji, loo ndlela yindlela yokuCwangciswa kweTekisi eyi-3 kwaye iya kusikhusela ekususweni ngengozi.
Imvelaphi Ubuntu boBomi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ungasibeka njani isicatshulwa esisezantsi 3 ngeSpanish
UJorge Ariel Utello sitsho
Phendula Jorge Ariel Utello
UEugenio Fernandez Carrasco sitsho
Iphi i-vi yobomi ... Ok, ndikuthengela i-vim?
Phendula u-Eugenio Fernández Carrasco
UJuan Pablo Pachr sitsho
Kuya kuba kuhle ukupapasha indlela yokubeka kwiimbotyi kwiSpanish
Phendula uJuan Pablo Pachr
I-cyber ngayo sitsho
Enkosi ngegalelo lakho. Phakathi kwe readme.md kunye neenkcukacha zakho, ndikwazile ukuyibeka ngeSpanish. Ndikwazile ukushiya imiyalelo enje:
Ukuguqulelwa kwiSpanish kweMenyu ePhambili yesi-3.
-Khuphela iphakheji kwi-GitHub njengefayile ye-ZIP (iqhosha «Clone okanye ukhuphele», emva koko «Khuphela i-ZIP»), uyivule kwaye ukhuphe wonke umxholo wesilawuli se- sublimetext_spanish- [version] ngaphakathi kwiphakheji yolawulo lwe-Sublime Text 3, wena Iya kubuza ukuba uyafuna ukudibanisa iphakheji yomsebenzisi: xuba iphakheji yomsebenzisi. Vala iwindow.
Kwifestile ephambili ye-ST3, kukhetho -> Khangela iiPakeji…)… Ngaba ayikabikho ngeSpanish?
-Ukususa i "Okungagqibekanga" kunye "nokuSebenzisa / ukuBekwa bucala kweSpanish" kwimikhombandlela kulawulo lweePakeji
Qaphela ukusuka galofre.juanLANUBEgmail.com: Andibekanga nto ngesiNgesi. Ifanele ukuba yeyokwaliwa, njengam, ukuba sidinge inyani kunye neenkcazo ezingakumbi.
Yithi ndlela-ntle kwii-accents kuba asinayo yonke i-UTF8-es kodwa iza umntu ukuba ifundeke, akukho bantu bathandekayo. Ndiyabulela ngomsebenzi wakho kunye nomntu owenze iphakheji, umntu onomdla onenjongo.
Ndiyabulela kakhulu! isebenze kakuhle
Igalelo elihle kakhulu ... ndiyiphumeze kwiLinux Mint Tricia ...
Ndiyabulela kakhulu malunga nemibuliso yolwazi evela eArgentina
I-Kid3 ye-Tag Tag Editor 3.6.0, umhleli wetek efanelekileyo
CopyQ Umphathi webhodi eqhotyoshwayo 3.3.0, lawula inkqubo yakho yebhodi eqhotyoshwayo